Halevina anio i Eckehart Olsowski
Rehefa nandrasana andro vitsivitsy, halevina eny Ambohimalaza anio i Eckehart Olsowski. Mialoha izany, mbola hanome voninahitra farany ity tale jeneralin’ny CGM ity ireo mpanakanto namany sy nahita soa taminy. Hisy ny sehatra hifandimbiasan’ireo mpanakanto ao amin’ny CGM ihany, manomboka amin’ny 11 ora.
Ifanihy etsy amin’ny Amitié Fandian
Efa volana vitsivitsy izay no nifindra etsy 67 Ha ny Amitié Fandian. Mandray hatrany ireo mpanakanto kosa ny toerana. Anjaran’Ifanihy indray ny mampiaina ny vazo miteny anio, manomboka amin’ny 9 ora alina. Elaela tsy nifamotoana tamin’ireo mpankafy azy teto an-drenivohitra ity mpanakanto ity.
Samoëla etsy amin’ny Piment Café
Taorian’ny fitetezam-paritra vitsivitsy nataony, manome fotoana ireo mpankafy azy etsy amin’ny Piment Café Behoririka indray i Samoëla. Ao anatin’ny fankalazana ny faha-20 taona hatrany, ka hitetezana ireo hira nanamarika izay ny fiarahana. Fotoana hampahafantarany ny “coffret” izay tsangambaton’ny fankalazana ihany koa izany.
Hira mafana etsy amin’ny Bonara Be
Mpanakanto maromaro, samy mpivoy ny hira mafana sy malaza amin’izao fotoana no indray hifarimbona hanafana ny fety etsy amin’ny Bonara Be 67 Ha, anio alina. Nine Doniah, Gangstabab, Ariane, Espérence, Lous’Fah, La sainte, Ludovic ary Joachim Michael no hifandimby sehatra mandritra izany. Marihina fa fanamarihana ny herintaona nisian’ity trano filanonana malaza etsy 67 Ha ity izy io.